I-China M1013 i-pvc iigloves zesandla ezikumgangatho ophezulu i-pvc yokulahla iiglavu ezili-10 iibhokisi zokhuseleko i-pvc iigloves zoMatshini nabaThengi | Xinyuanjiaye
Iigloves zesandla se-M1013 pvc esemgangathweni ophezulu i-pvc elahliweyo Iibhokisi ezili-10 iibhokisi zokhuseleko kwi-pvc
Ukukhuselwa kwinqanaba eliphezulu lonyango ngaphandle komgubo kunye neeprotex ze-latex. Iigloves ezifanelekileyo ze-vinyl kubantu abachaphazelekayo yimizwa ye-latex. I-Smooth, cuff beaded. Amandla anobunzima obukhulu. I-Powder ekhululekile ukwenzela ukuba ingaphazamisi i-adhesives okanye iingubo.
Iiglavu zasimahla zeVinyl zePowder zibonelela nge-100% yento yokwenziwa, ilula kwaye ithambile kune-vinyl esemgangathweni kwaye inokhuselo lomhlaba kwii -appatgion ezininzi. Imvakalelo elungileyo kunye nokusebenza. Luyindlela elungileyo yokuhlala abo banengxaki yokugula.
1.Isixhobo se-pvc, esingabinetyhefu, singenachaphaza kwaye siyinto ecoceke, iigloves zikhuselekile kubo bonke abasebenzisi.
Ukucoca ngokucokisekileyo, iigloves ziyalahlwa, uyilahla emva kokuyisebenzisa.
Uyilo lwe -ompompact kunye neLightweight, kulula ukuthwala.
4.Qamba izandla zakho zicocekile
Iingcebiso zokunxiba iiglavu zethu zeVenkile ye-PV:
1. Nceda usike iminwe xa unxiba. Iiminwe emide kakhulu okanye ebukhali kakhulu zinokuzonakalisa lula iigloves.
2. Nceda usebenzise iipads zeminwe yakho ukunxiba, ukuthintela ukuwa kwegloves.
3. Nceda ujike iigloves kwisandla sakho ukuya kwiminwe xa ususa iigloves.
Inkqubo yokuvelisa yeigloves ze-latex: Iigloves zeLatex ezenziwe ngezinto ezisemgangathweni zokwenziwa / zendalo ye-latex kunye nezinye izinto ezifanelekileyo zinamandla angqinelaniyo kunye nokuqaqamba; Inkqubo yonyango yonyango eyingqayizivele, akukho kukhathazeka kwesikhumba kunye ne-allergy; iimveliso zinezinto ezikhethekileyo zokunyanga umphezulu, umphezulu ocekeceke ngaphakathi kunye nokugobile kulula ukunxiba kwaye zikhululekile.
Izinto eziluncedo kwiigloves ze-latex: Iigloves zeLatex zikwindawo yonke kuzo zombini izandla, ezinamajika ajikeleze kunye noyilo lwe-skid kumphezulu; zijongana nokungakhathali kunye nokukotshwa kweepunip; bamelana ne-acid, ialkali, igrisi, ioyile yeoyile kunye nezinyibiliki ezahlukeneyo, njl .; banoluhlu olubanzi lokuchasana neekhemikhali, ukumelana neoyile elungileyo kwaye / kukhuselekile / kukhuselwa ngesandla
Ukusetyenziswa kweigloves ze-latex: Iigloves zeLatex zilungele ikhaya, umzi-mveliso, ubuhle, uphando lwezenzululwazi, izixhobo ezichanekileyo, ukuvelisa iimoto, ukwenziwa kwebhetri, ishishini le-FRP, indibano yeenqwelo moya, ishishini leenqwelo moya, ukucocwa kwendalo nokucoca.
Edlulileyo: Imaski yendebe
Okulandelayo: Iiglasi zoKhuselo lweAn Saliva ye-Anti Saliva Goggles ecacileyo yokuKhusela Amehlo okuSebenzisa unyango
I-SGS iqinisekisile ukuba i-75% yotywala obungenamanzi ngesandla ...
Iiglasi zoKhuseleko lwe-Anti Saliva zeGaggles ezicace Ey ...
umgangatho ophezulu wokukhupha izinto ezingaluswanga ezingalukanga